सीमा स्तम्भमा सु’रक्षाकर्मीको पहुँच ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ७, २०७८ सोमबार 249
काठमाडौं : हुम्ला खण्डको उत्तरतर्फ नेपाल र चीनबीचका १५ वटा सीमा स्तम्भमा सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) हिल्सामा सु’रक्षाकर्मी पुगेपछि अनुगमन सहज भएको छ । पछिल्लो पटक सशस्त्र प्रहरी बलका एक टोली सीमा स्तम्भ नम्बर ४ मा पुगेपछि त्यस क्षेत्रका सबै स्तम्भमा नेपालका सुरक्षा निकायको पहुँच पुगेको हो ।
यसअघि केही स्तम्भमा सु’रक्षाकर्मी पुगेको र केहीमा पुग्न नसकेका कारण सीमा स्तम्भको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी लिन सक्ने अवस्था थिएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले हिल्सामा बीओपी स्थापना भएयता सबै सीमा स्तम्भ पहिचान गर्न सफल भएको बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ स्थापनापछि सीमा स्तम्भ नम्बर ३, ४, ११ र १२ मा केही महिना अघिसम्म कुनै सरकारी निकाय पुगेका थिएनन् ।
Prevतेस्रो धारलाई ओली पक्षले भन्यो- अब बा’र्गेनिङ चल्दैन !
Nextओलीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुभयो, त्यसपछि चुनाव हराउनुभयोः- बामदेव गौतम ।
यी महिना जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् करोडपति , कुन महिना जन्मिने व्यक्ति कति धनि ? जान्नु-होस् ! (899)